Fotoana famakiana: 5 minitra Na iza na iza eto avy any ivelan'i Eropa? Atsangano ny tananao ianao, raha araka ny mivaralila ny fitateram-bahoaka tahaka ahy. Azo antoka, New York manana metro, ary i Toronto dia mihodina ny metro, fa amin'ny alàlan'ny lehibe, mivezivezy amin'ny fiara izao tontolo izao. So whenever we find ourselves making the…
Fotoana famakiana: 4 minitra Noho izany dia efa nanao izany farany. Ianao nandatsaka noho ny vakansy any am-piasana, Nividy tapakila ny fiaramanidina ka nitodi-doha ho an'i Hongria ho tsara mendrika fety. Ary raha izay no Raharaha tsara ihany no tsara – sady koa anie, Budapest dia tanàna tsara tarehy – don’t sell yourself…
Fotoana famakiana: 5 minitra Naples no tena tsara, quintessential Italiana tanàna. Feno havoana, trano taloha, sy ny kely na mahafatifaty fahagagana. Izany dia ny tonga lafatra indrindra Italiana tanàna ho an'ny olona rehetra izay te hiaina ny tena Italiana fanahy sy ny tsara indrindra avy any Naples andro fitsangatsanganana. Na izany aza,…
Fotoana famakiana: 5 minitra Florence dia mahagaga toerana andry sy misy taonina hanao. fa, raha mitady ny barotra mihoatra noho izany renivohitra, efa nahazo anao voasarona. Misy ny sasany ny fitsidihana toerana mahagaga izay mitaingina fiaran-dalamby fotsiny miala Florence. Eto…
Fotoana famakiana: 4 minitra Efa nahazo Nifandray ny tantara, kanto, sy ny kolontsaina any Bruxelles ary ianareo dia vonona ny hijery ny tanàna ivelan'ny sisintany izao. Soa ihany, misy ihany koa ny maro mba hijery lavitra ao anatin'ny iray andro avy any Brussels. Loatra izany, fa efa nanapa-kevitra…
Fotoana famakiana: 4 minitra Sarotra ny misafidy ihany 5 Easy nivezivezy Day By Train From Milan mba hizara aminareo. Italia lamaody capital no Marevaka amin'ny safidy ho an'ny mpizaha tany ny mitsidika. Tsy vitan'ny no feno lamaody, saingy manana tantara tsy mampino, trano sy ny tsara tarehy…
Fotoana famakiana: 3 minitra Amin'ny maha-tsara tarehy, tànana hafa kely tanàna be hanatitra, Vienna dia malaza Travel toerana halehany. Na izany aza, izany ihany koa tanàna voahodidina maro hafa mahaliana tianao. Raha manam-potoana ho an'ny andro iray lavitra avy any Vienne, aiza no tokony tsinjovy? izahay…
Fotoana famakiana: 3 minitra Roma dia tanàna tsara tarehy, fa indraindray ny mpandeha te hihinana kely isan-karazany. Ireo izay mijanona ao Roma ampy hijery ela dia mety maniry ny hanana Jereo manodidina ny faritra, koa. Soa ihany, izany no andro fitsangatsanganana dia ho an'ny! Considering how well…